Snaps မှတဆင့် cryptocurrencies Mining? Canonical က၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုထုတ်ဝေသည် Linux မှ
Snaps မှတဆင့် cryptocurrencies Mining? Canonical က၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုထုတ်ဝေသည်
လူးဝစ်လိုပက်ဇ် | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 17/05/2018 10:23 | NOTICIAS
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Snap Store မှ 2048 packbuntu နှင့် Hextris မှ Snap package နှစ်ခုကိုပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကသုံးစွဲသူများစွာကဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့အသုံးပြုသူများကိုမသိဘဲအလယ်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် cryptocurrencies တူးဖော်။ ဟုတ်ပါတယ်, Canonical ချက်ချင်းဒီ applications များဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ယနေ့ Ubuntu အတွက်တာ ၀ န်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီကထိုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏အနေအထားကိုပြောကြားခဲ့သည် Snaps မှတဆင့်သတ္တုတူးဖော်ရေး cryptocurrencies ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိပါတယ် နေသမျှကာလပတ်လုံး developer ဒီမှတဆင့်အသုံးပြုသူများကိုအကြောင်းကြားအဖြစ်။
Canonical မှပြောကြားသည်မှာသတ္တုတူးဖော်ခြင်း cryptocurrencies သည်တရားမ ၀ င်သောသို့မဟုတ်ကျင့်ဝတ်နှင့်ညီညွတ်မှုမရှိသောကြောင့် Nicolas Tomb (ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းနှစ်ခုကိုဖန်တီးသူ) ပြုလုပ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာသည်အသုံးပြုသူများကိုသတိပေးရန်မဟုတ်ပါ။
အပြန်အလှန်အားဖြင့်နီကိုလပ်စ်ကသူ၏ရည်မှန်းချက်မှာ Canonical ကိုအသိပေးခြင်းဖြစ်သည် "အဲဒါကိုခွင့်ပြုလိုင်စင်အောက်မှာဖြန့်ချိ software ကိုပိုက်ဆံအိတ်။ "
Canonical သည်၎င်း၏ Snap Store ၏လုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေရန်ကတိပေးခဲ့သည်
တူညီသောထုတ်ဝေမှုတွင်လည်း Canonical မှ၎င်းသည်နေ့စဉ် store တွင်ထုတ်ဝေသောရာနှင့်ချီသော application များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်စွမ်းရည်မရှိကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းအားဖြင့်သိထားသောရင်းမြစ်များနှင့် developer များထံမှ application များကိုသာ install လုပ်ရန်အကြံပြုသည်။
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် application ကို install လုပ်ရန်၊ မထည့်ရန်ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်တိကျသော developer များအားမှတ်သားနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏ Snap Store ၏လုံခြုံရေးကိုပိုမိုအားကောင်းလာစေရန်ကတိပေးခဲ့သည်။
အခုအချိန်မှာ Snap Store ကိုစတိုးဆိုင်များ ၃၀၀၀ ကျော်သည် open source applications များနှင့် closed source applications များအကြားခွဲခြားထားသည်။
၎င်း၏ဒီဇိုင်းကြောင့် Snap format သည် Flatpak သို့မဟုတ် AppImage ကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင် (sandbox) အတွင်း၌ပါရှိသောကြောင့်အလွန်လုံခြုံသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Snaps သည် Ubuntu ကိုအသုံးပြုရုံသာမက Arch Linux, Solus, OpenSuSE, Fedora, Debian GNU / Linux, Gentoo Linux, Linux Mint နှင့် OpenWrt ကဲ့သို့သောအခြားဖြန့်ချီမှုများစွာတွင်လည်းလည်ပတ်သည်။ အားလုံးအသုံးပြုသူများ၏အကူအညီမပါဘဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » NOTICIAS » Snaps မှတဆင့် cryptocurrencies Mining? Canonical က၎င်း၏ရပ်တည်ချက်ကိုထုတ်ဝေသည်
Lizer ၂၁ ဟုသူကပြောသည်
မကောင်းဘူးဆိုရင်သူတို့ pc ကိုသတ္တုတွင်းတူးဖို့သုံးပြီးယေဘူယျစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလျှော့ချမယ်ဆိုရင် linux မှာတောင်မှငါကငါသြဂုတ်လကိုခံစားရလိမ့်မယ်။
အနည်းဆုံးသင့်ရဲ့ PC ကိုသတ္တုတွင်းလုပ်ဖို့အသုံးချမယ့်လုပ်ငန်းသုံးဆော့ဗ်ဝဲကို install လုပ်မထားဘူးလား :)
Luis Lopez ကိုပြန်ပြောပါ
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတယ်။ ဒီတော့ငါနေ့တိုင်းအသုံးပြုနေတဲ့ applications တွေကို install လုပ်နိုင်တယ်။ မင်းဘယ်လိုလုပ်လဲ hehe .. မည်သည့်နည်းပြဆရာ?
တူညီသောထုတ်ဝေမှုတွင်၎င်းသည် developer သည်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများအကြောင်းသတိပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာ software သည် cryptocurrency ကိုတူးဖော်နေကြောင်းအသုံးပြုသူအားအသိပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် software တစ်ခုခုကိုထည့်သွင်းသင့်မသင့်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းကိုသင်အသုံးပြုလျှင်၎င်းသည် virtual နှင့်အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးများတူးဖော်ရန်အတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုကျင့်သုံးပါကသင့်အားအကြောင်းကြားလိမ့်မည်။
၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းတီထွင်မှုမှအကျိုးအပြည့်အဝရယူရန်မကောင်းသောလမ်းဟုမထင်ရသော်လည်းယုတ္တိရှိသောအချက်မှာ၎င်းကိုသတိပေးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျအဖွဲ့အစည်းများမှတွက်ချက်မှုများပြုလုပ်ရန်သင်၏ကွန်ပျူတာကိုအနားယူချိန်တွင်အသုံးပြုရန်တောင်းဆိုသည့်အီးမေးလ်များနှင့်တူသည်။ ငါ့ကိုပြောပါ၊ ငါ and ဟုတ် or မဟုတ်၊
Debian 8 Jessie ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များသည်ဇွန် ၁၇ ရက်တွင်အဆုံးသတ်ပါမည်
MellowPlayer - streaming ဂီတဖွင့်စက်